Jose Mourinho: Waa la dhaafay waqtigii Barcelona mana ahan in la is daaliyo. - Caasimada Online
Home Warar Jose Mourinho: Waa la dhaafay waqtigii Barcelona mana ahan in la is...
Jose Mourinho: Waa la dhaafay waqtigii Barcelona mana ahan in la is daaliyo.
Tababaraha kooxda Real Madrid Jose Mourinho ayaa rumeysan inuusan jirin tusmo loogu daydo Barcelona ka dib markii ay gacmaha Real Madrid La Liga halka ay Chelsea sanadii hore ka reebtay Champions League.
Catalans ayaa inta badan lasoo jeedinaayey inay tahay koox mudan in lagu daysado ka dib guulohoodii dhowaanahaan, laakiin Ninka reer Portugal uma muuqato falsafad kubadeed Barca iyo inay tahay koox quwadeedii luntay.
“Waxaan u maleynayaa in la gaaray goortii ay dadku iska dhaafi lahaayeen ka hadalka Barcelona,waan inaysan dadku is xiijin is bar-bar dhig ay nagula sameeyaan,” ayuu Special One u sheegay France Football.
“Waa maxay sababta ay dadku uga hadlayaan Barca? Real Madrid ayaa ah horyaalka Spain, Chelsea-na waa horyaalka Yurub. Barcelona waqtigaan ma ahan labadaasna midkood.”
W/Q: Ahmed Farah Salaad Jaangoan